Soo celinta Qalabka Tignelojiyada Ardayda SPS - Seattle Public Schools
Seattle Public Schools/District News/Soo celinta Qalabka Tignelojiyada Ardayda SPS
Soo celinta Qalabka Tignelojiyada Ardayda SPS
Summary: Ardayda intooda badan waxay soo celin doonaan qalabkooda SPS.
Qalabka ardayda ee Dugsiyada Dadweynaha Seattle (SPS) waxay u baahan doonaan in lagu soo celiyo dugsigaaga ka hor dhammaadka sannad dugsiyeedka. Haddii aan la soo celin aaladda SPS iyo agabka kale, waxa lagugu dallici doonaa ganaax.
Ardayda u baahan inay soo celiyaan qalabka iyo qalabka SPS
Ardayda intooda badan waxay soo celin doonaan qalabkooda SPS.
Dhammaan ardayda aan lagu qori doonin SPS dayrta.
Ardayda dhigata barnaamijyada tacliinta xagaaga ee Dugsiyada Dadweynaha
Seattle ee goobta SPS waxay soo celin doonaan qalabkooda hadda oo dib ayaa loo soo saari doonaa qalab kale oo loogu talagalay barnaamijyada tacliinta xagaaga ee SPS. Barnaamijyada xagaaga ee SPS waxaa ka mid ah Sannad dugsiyeedka la dheereeyey (ESY), Adeegyada Soo kabashada, jaranjarada xagaaga ee K-8, ama dib u soo celinta credit.
Ka Dhaafid Kooban: Ardayda xafidi karta qalabka SPS xagaaga
Haddi uu ardaygaagu dhigto barnaamij tacliin xagaa ah oo aan lagu qaban meel SPS ah (Tusaale waxa uu noqon karaa Bound Upward at Seattle University)
Fiiro gaar ah: Waxaad ku arki doontaa ganaax akoonkaaga ah kaas oo laga saari doono marka qalabka SPS la soo celiyo dhamaadka barnaamijka xagaaga. Si aad u diyaargarowdid soo laabashadan, fadlan ka wac Khadkayaga Student Techline 206-252-0100 ama iimayl u dir laptops@seattleschools.org
Haddii ardaygaagu uu xubin ka yahay guddiga hogaaminta ardayda degmada sida Golaha Hogaaminta Ardayda AAMA.
Haddii ilmahaagu helo adeegyada waxbarashada gaarka ah oo ay haystaan qalab loo soo saaray qayb ka mid ah Barnaamijkooda Waxbarashada Gaarka ah (IEP). Tan waxa ku jira aaladaha ardada ay bixiso Waaxda Adeegyada Tignoolajiyada ee ardaygu u isticmaalo hoyga IEP iyo/ama aaladaha ay si toos ah u soo saarto Tiknoolajiyada Caawinta Waxbarashada Gaarka ah (sida caadiga ah lagu calaamadeeyay istiikadhka xidhiidhka cagaaran ee dhalaalaya).
Sida lagu dhawaaqay bilowga sannad dugsiyeedka, ganaax ayaa lagu dabaqi doonaa akoontiga ardayga haddii aan la soo celin qalabka ama qalabka kale. Haddii dugsigaagu aanu soo saarin mid ka mid ah agabyada hoos ku taxan, lacag laguguma dalaci doono.
Qalabka iyo agabka la soo celinayo:
Laptops ($ 350 ganaax), boorso laptop ($ 10.50 ganaax), iyo charger laptop ($ 48 ganaax)
iPads ($250 ganaax), kiis iPad ah ($49 ganaax), iyo iPad charger ($40 ganaax)
Goobaha WiFi iyo xajiyeyaasha
Waalidiinta ama dadka ardayda masuulka ka ah waxay awoodi doonaan inay ku bixiyaan ganaaxa khadka internetka iyaga oo u maraya Source Account.
Ganaaxyada sidoo kale waxaa lagu bixin karaa dugsiga ardaygaaga. Fadlan kala xidhiidh xafiiska dugsiga sida loo bixiyo ganaaxa ardayda dugsiga.
Akhri warqadda Sebtembar 2021 qoysaska ee ku saabsan khidmadaha Tignoolajiyada.
Haddii aad wax su’aalo ah qabtid, fadlan kala xidhiidh Khadka Ardayga ee laptops@seattleschools.org ama wac 206-252-0100